Madaxweyne Biden oo telefoon kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru.sida lagu sheegay war ka soo baxay Aqalka Cad. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Biden oo telefoon kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru.sida lagu sheegay war...
Madaxweynaha Maraykanka, Joseph R. Biden ayaa Khamiistii telefoon kula hadlay madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta. War saxaafadeed ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu u xaqiijiyey dhiggiisa Kenya muhiimadda uu leeyahay xiriirka Maraykanka iyo Kenya. Biden ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida ay Maraykanka uga go’an tahay inuu sii wado in Kenya uu kala shaqeeyo nabadda iyo amniga gobolka, taas oo ay ku jirto marka Golaha Ammaanka la joogo, [kaas oo Kenya ay hadda xubin ka tahay.
Previous articleBooliska Hindiya oo qabtay nin gaystay kufsi wadareed 1999-kii. Wuxuu baxsad ahaa muddo ka badan labaatan sano.
Next articleCayaaryahan Benjamin Acheampong oo sheegaya in mid ka mid ah naadiyada kubadda cagta ee Masar uu ka khiyaamay lacag dhan 1 milyan oo doolar